नेपाल आज | शिक्षक हत्यापछि झस्कियो सरकार, विप्लव विरुद्ध यस्तो छ रणनीति !
शिक्षक हत्यापछि झस्कियो सरकार, विप्लव विरुद्ध यस्तो छ रणनीति !
बिहिबार, २५ मङि्सर २०७७ गते प्रकाशित - नेपाल आज
नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको समूह ‘नेकपा’ ले मंगलबार मोरङको उत्तरी भेग मिक्लाजुङ गाउँपालिका–१, रमितेस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको हत्या गर्यो । सुरुमा गोली हानी हत्या गरेको भनिएका श्रेष्ठको दुवै हात वाँधेर घाँटि रेटी निर्मम तरिकाले हत्या गरेको भेटियो ।
विप्लव समुहले उक्त घट्नाको जिम्मा लिएको छ । तर, प्रधानाध्यापक श्रेष्ठमाथि सुराकी गरेको आरोप लगाईएको छ भने प्रतिकारमा उनको मृत्यु भएको उक्त समुहले जनाएको छ । विप्लव समुहका कार्यकर्ताले श्रेष्ठलाई मंगलवार विहान घरवाटै अवहरण गरेर लगेका थिए ।
यस लगत्तै वुधवार प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीले कार्यविभाग प्रमुख (एआईजी) हरिबहादुर पाल र विशेष ब्युरोका डीआईजी प्रकाशजंग कार्कीसँग चन्द समूहका गतिविधि नियन्त्रण र प्रहरीले लिने आगामी रणनीतिबारे छलफल गरे। दिउँसो गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुरक्षा वैठक वोलाएका थिए । प्रहरी महानिरीक्षक थापा, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर चन्द समूहका गतिविधिबारे जानकारी लिए।
सुरक्षा समीक्षा बैठकमा चन्द समूहका ‘आतंककारी गतिविधि’ लाई संयम र सुझबुझपूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव सुरक्षा प्रमुखहरूले दिएका थिए ।
यसपछि करिब दुई वर्षदेखि भूमिगत रहेको नेकपाका गतिविधिमाथि निगरानी गर्न र हतियारसहितको गस्ती बढाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभरका युनिटलाई परिपत्र गरेको छ  । मिक्लाजुङको जस्तै घटना अन्य स्थानमा पनि दोहोरिन सक्ने भन्दै सचेत रहन सात वटै प्रदेश, महानगरीय प्रहरी कार्यालय र देशभरका संघीय इकाइ कार्यालयलाई परिपत्र गरेको हो ।
परिपत्रमा ब्यारेक र कार्यालयको सुरक्षा गर्न तथा चन्द समूहका गतिविधिबारे सूचना दिनेको सुरक्षा गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
चन्द समुहले गत मंसिर १ गते संखुवासभाको चैनपुर, मैदानेमा प्रहरीविरुद्ध आक्रमण गरेको थियो । त्यसअघि साउन १ गते चन्दले विज्ञप्तिमार्फत संघर्षलाई सशक्त बनाउन तथा प्रतिरक्षा र प्रतिरोधात्मक कारबाही सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
चन्दले पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको सुराकी गर्ने, दुःख दिने र पार्टी गतिविधि नियन्त्रण गर्न परिचालित हुनेविरुद्ध कारबाहीमा उत्रिन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए ।
सरकारले २०७५ माघ २८ गतेदेखि चन्द समूहका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपपछि प्रहरीले उक्त समुहका नेता÷कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्न थालेको छ । हाल चन्द समूहका सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीसहित १ सय ४३ जना पुर्पक्षका लागि कारागारमा र केही प्रहरी हिरासतमा छन।
ओलीलाई हटाउन नसक्ने भएपछि अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता : बस्नेत
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पाउँ भनेको छैन, जिम्मेवारी आयो भने भाग्नेवाला पनि छैनः सभापति देउवा
लक्ष्यभन्दा रु ४४ करोड बढी राजस्व सङ्कलन